အတ္တ၏ ဒဏ်ရာများ: တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညနဲ့ အတွေးတစ်စ
အဇာတသတ်မင်း ဆိုသည်နှင့် လွန်စွာရက်စက်သော အဖသတ်မင်းအဖြစ် ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘိုးဘွားများ ပြောသောရှေးစကား(အိပ်ယာဝင်ပြောသောပုံပြင်)ထဲတွင် တိတ်တခိုး ရွံမုန်းကြောက်လန့်ခဲ့သော သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အရွယ်ရောက်လို့ အိမ်ထောင်တွေကျပြီး ကလေးတွေရလာလို့ ကိုယ့်ကလေးနှာစီးလို့ အသက်မရှုနိုင်တဲ့အခါ နှာခေါင်းကို စုပ်ရတယ်လို့ ပြောကြတော့ ကိုယ့်ကလေး ကျပ်နေတာကို သနားလို့ သူ့နှာခေါင်းသေးသေးလေးကို စုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့် ပါးစပ်ထဲရောက်လာတဲ့ နှပ်ချေးတွေကိုတော့ ပြန်ထွေးထုတ်ခဲ့တယ်။ အဲလို လုပ်မိတဲ့အခါတိုင်း ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးကို သွားသတိရပြန်တယ်။ သူဆို တိုင်းပြည်ရဲ့ အရှင်သခင်တစ်ပါးဖြစ်နေတာတောင် သူ့သားငိုနေတာကို ကိုယ်တိုင်ချီပိုးပြီး ချော့တယ်၊ နောက် လက်မှာပေါက်နေတဲ့ ခူနာကို ပါးစပ်မှာ ငုံပြီး ပြည်ပေါက်တာတောင် ထွေးမပစ်ပဲ မြိုချတယ်တဲ့။ သားအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာက ကြီးမားလွန်းနေတော့ ပြည် အရိအရွဲတွေကို ရွံ့စရာအဖြစ် (ဒေါမနဿ) အတွေးတောင်ပေါ်ချိန်မရဘူး။ အိပ်နေတဲ့ သားတော်လေး နိုးသွားလိမ့်မယ်။ ချမ်းချမ်းသာသာ ဆက်အိပ်ပါစေ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ မြိုချခဲ့တယ်။ (ကိုယ်တောင် သူ့လောက် သားသမီးကိုချစ်နိုင်ပါ့မလား?)
နောက်အသက်တွေရလာလို့ ဘာသာရေးဖက်လိုက်စားပြန်တော့ ၀ိပဿနာအလုပ်စခန်းတွေဝင်ပြန်တော့ အဇာတသတ်မင်းအကြောင်း ဆရာတော်တွေ ဟောတာ နာကြားရပြန်တယ်။ အဇာတသတ်မင်းဟာ ဘ၀များစွာကဖြည့်လာတဲ့ ပါရမီတွေကြောင့် အခုလက်ရှိဘ၀မှာ အရိယာဖြစ်နိုင်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပါလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာမှားနဲ့ လက်တွဲမိခဲ့လို့ အကျိုးယုတ်ခဲ့ရတယ်။
အဖေကို သတ်ခဲ့မိလို့ နောင်တရတဲ့အချိန် ခုလို တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညမှာပဲ ဘုရားရှင်ထံ သမားတော်ကြီး ဆရာဇီဝကရဲ့ အကူအညီနဲ့ ရောက်ရှိ ဖူးမြှော်ပြီး သူသိလို့တဲ့ "ရဟန်းပြုရတဲ့အကျိုး" ကို မေးလျှောက်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်က သာမညဖလသုတ္တန်( ရဟန်းပြုရတဲ့ အကျိုး) ကိုဟောတော်မူပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အဇတသတ်မင်းဟာ အဲဒီ တရားအဆုံးမှာ သောတာပန် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပါရမီပါလာခဲ့ပေမယ့် ဖခင်ကိုသတ်ခဲ့တဲ့ကံ(ပီတုဂါတကကံ) ရှိနေလို့ သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်နဲ့ လွဲခဲ့ရပါတယ်။
ပါရမီတွေပါလာခဲ့ပေမယ့် ပါပမိတ္တလို့ ဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့ဆရာသမား၊ မိတ်ဆွေနဲ့ ပေါင်းသင်းမိရင် အဲဒီပါရမီက အကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူး။ ဆိုတော့ကာ လက်ရှိမှာ ဆရာသမားကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ဖို့ လိုသလို ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်မှ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်ကို ရရှိနိုင်မယ်လို့ တွေးမိပြန်တယ်။ ပါရမီချည်းလည်း အားကိုးလို့မရဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။
posted by အတ္တ @ November 27, 20123Comments
At January 20, 2013 at 4:31 PM , Anonymous said...
Hello there, I found your blog via Google even as looking foracomparable subject, your web site got here up, it seems
Hi there, simply became aware of your weblog via Google, and located that it is really informative. I'm going to watch out for brussels.
I'll be grateful when you proceed this in future. Numerous folks will be benefited out of your writing. Cheers!
Review my website : online usa casino
At January 20, 2013 at 5:16 PM , Anonymous said...
Feel free to surf my blog post ... online slot machine real money
At January 20, 2013 at 7:18 PM , Anonymous said...
I am glad to search out so many helpful information here within the publish, we want develop more
Here is my homepage : slots real money